Shatiga qoob ka ciyaarka oo dhaliyey dood hor leh - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shatiga qoob ka ciyaarka oo dhaliyey dood hor leh
La daabacay torsdag 11 december 2014 kl 14.46
Kala dambeeynta ayaa lagu sugayaa.
Sawirle: Steve Pope/TT
Shatiga daansiga ama qoob-ka ciyaarka ayaa dood mar kale dhaliyey, dabadeed kolkii uu ciidanka ammaanka dacwad ka furay ka dhan ah maqaayad ku taala magaalada Gävle, halkaasina oo martidii maqaayadda ey bilaabeen iney daansiyaan, iyada oo aaney maqaayaddu hey-san ogolaansho lagu qoob ka ciyaari karo.
Stefan Lundin, ahna madaxa laanta shuruucda ee ururka mulkiileyaasha maqaayadleeyda Visita, ayaa sheegay inuu maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo uu caqabad ku yahay shatiga ogolaansho ee qoob-ka ciyaarka.
- Dhan waa howl-dheeri ah oo loo baahnaan lahaa in laga kaaftoomo, waxaa iyaguna jira dhacdooyinka noocani oo kale ah oo mararka qaarkood ay saxaafaddu wax ka qorto ama ka baahiso. Kolka ay dhacdo in martida maqaayadda qaarkood ey ku daansiyaan goobta, ciidanka ammaankuna ogaado in aaney maqaayaddaasi lahayn shati ama leeysan u ogolaanaya, isla-markaana muusik lagu dhageeysaneyo maqaayadda oo sida mararka qaarkood dhacdana ey dadku ku dhaqdhaqaaqaan muusikada. Markaa ayey ciidanka ammaanku faraha la soo galaan maadaama aan la heey-san ogolaansho, sida uu sheegay Stefan Lundin oo u hadlayay ururka mulkiileyaasha goobaha cunnada iyo caweeyska ee Visita.
Maamullada maqaayadaha aan hay-san shattiga qoob-ka ciyaarka ayay tahay asuuliyad saaran iney ka hor-tagaan inaan maqaayadda lagu daansin, middaasina ku gaari karaan iney kuraas iyo miisas dhigaan ka hor istaaga martida maqaayadda ee xiiseeynaya qoob-ka ciyaarka. Haddii aaney middaa dhicinna waxay qarka u saaran yihiin mulkiileyaashu in marka ugu horreeysa ganaax dusha looga tuuro. Bishii oktoobar ee sannadkan ayaa laba mulkiileyaasha laba maqaayadood oo ku yaala magaalada Uppsala 5000 oo ganaax ah lagu ridey, iyadoona ey ka dambeeysay marti maqaayadda ku qoob-ka ciyaartey.
Xeerkan ayaa ka dambeeya qoraal-xeereed salka ku haya nidaamka iyo kala dambeeynta ee sannadkii 1993, midaasina oo ka dambeeysay "rabshadihii qoob-ka ciyaarka oo aad u xoogeeystey ee sannadihii afartameeyadii.
- Laxanka muusikadu wuxuu dhaqdhaqaajiyaa oogada ruuxa, oo waxaa la doonaa in la daansiyo...
- Rabshadihii qoob-ka ciyaarka ayaa loola jeedey...
Sannooyin dhowr ah ayaa golaha baarlamanka la soo hor-dhigey mooshinno la xiriira sidii loo baabi'in lahaa xeerka shatiga daansiga ee maqaayadaha. Sannadkaa ayey mooshinnadaasi ka yimaadeen xisbiyada Socialdemokraterna (S), Vänster (V) iyo Kristendemokraterna (KD). Mooshinnadan ayaa dhowr jeer gaarey guddi-hoosaadka xeerka ee baarlamanka ugu dambeeyn sannadkii 2011. Kolkaasina oo ay soo baxday in ammaanka iyo nidaamku ka muhiim-san yihiin baahida loo qabo dhimista idaamyada qalaf-san ee maamullada - byråkarati-ga waxa loo yaqaanno.
Robert Lindgren oo ka mid ah saraakiisha laanta shatiyada ee ciidanka ammaanka ayaa sheegay inay xaaladda maqaayaddu is-bedesho kolka ey martida maqaayaddu bilaabaan iney qoob-ka ciyaaraan:
- Halka ey kolka hore goobo kala durug-san fadhiyaan ayey goob ku ururaan. Waxaa hoos loo dhigaa ileeyska maqaayadda oo kor loo qaadaa muusikada. Sidaa daraaadeed waa mid loo baahan yahay in qaabka maqaayaddana wax laga bedelo, ammaankeeda iyo madaama howlaha loogu talo-galey in lagu qabto ey wax iska bedeleen. Waxaa dhici karta in loo baahan yahay goobo ka badan ee laga baxo haddii ay masiibo ka dhacdo goobta. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay alaarmi ku xiran sawaxanka muusikada iyo ileeyska haddii uu dab kaco.
Robert Lindgren ayaa garwaaq-san in fahamka shatiga qoob-ka ciyaarku yahay mid su'aalo dhalin kara, hase yeeshee ay ula muuqato in loo baahan yahay, maadaama aaney maantadan jirin hab kale ee lagu xadidi karo ammaanka goobaha lagu daansiyo ee caweeysyada. Hase yeeshee aanu middaa ku raacsanayn Stefan Lundin-ka Visita:
- Waa lagama maarmaan in maqaayadaha iyo goobaha caweeysyadu leeyihiin nidaam kala dambeeyn ee wanaag-san. Amuurtaa maahan mid uu shaki ka jiro. Hase yeeshee iminkadan ayey shuruuduhu aad u sarreeyaan oo uu ka mid yahay ogolaanshaha shatiga iibinta, sida uu sheegay Stefan Lundin.